Pave nemwedzi kubvira NVIDIA yaburitsa yavo Turing based GeForce RTX 20 akateedzana makadhi emifananidzo. Kutora kubva kwakazara kubva kuchinyakare GPU dhizaini uye kugadzira iyo yemasanganiswa dhizaini iyo inosanganisira huwandu hwetekinoroji nyowani kusimbisa chinotevera-chizvarwa chinonyudza zviitiko zvemitambo.
Chinonyanya kukosha cheiyo GeForce RTX 20 akateedzana yaive yekugonesa yeiyo chaiyo-nguva raytracing inova iyo inoera grail yemifananidzo uye chimwe chinhu NVIDIA chakapedza makore gumi kuita zvakakwana. Pamusoro pe raytracing, NVIDIA zvakare inovavarira kuisa kubhejera paAI iyo ichaita chinzvimbo chakakosha mukumisikidza maficha senge DLSS kana Kudzidza Kwakadzika Super Sampling, yakasarudzika nzira yekupa iwo iwo iwo akafanana iwo maitiro seanonyanya kubhadhara mutero weMSAA AA maitiro kaviri kuita .
Ndakatarisa ndikaenzanisa mashandiro eakawanda maGeForce RTX 2080 Ti uye GeForce RTX 2080 tsika dzakasiyana uye anovaona sepundutso yakanaka pamusoro pevakavatangira, iyo GTX 1080 Ti uye GTX 1080. Kana zvasvika pamutengo, iyo GeForce RTX 20 akateedzana mamwe emakadhi anodhura kwazvo NVIDIA yakapa kune vatengi. Nhasi, ndichave ndichitarisa iyo GeForce RTX 2070 kadhi yemifananidzo inova iyo $ 500 US mhinduro uye isingadhuri yemhuri yekutanga yeTuring RTX 20 yakaziviswa gore rapfuura.
Iine iyo imwecheteyo Turing GPU dhizaini, iyo RTX 2070 inogona kuoneka senge yepamusoro-mashandiro makuru sarudzo iyo inorehwa kutsiva iyo GTX 1070 Ti yeinenge ingangoita imwecheteyo poindi yemutengo iyo inoratidzwa mutafura iripazasi.
NVIDIA GeForce GPU Chikamu / Mutengo Mitengo
mutengo $ 999 US $ 1199 US $ 1199 US $ 2999 US $ 2499 US
Mudiwa Mukuru weC Ultra GeForce GTX 980 Ti GeForce GTX 980 Ti GeForce GTX 1080 Ti GeForce RTX 2080 Ti GeForce RTX 2080 Ti
mutengo $ 649 US $ 649 US $ 699 US $ 999 US $ 999 US
Mudiwa Mukuru Tier GeForce GTX 980 GeForce GTX 1080 GeForce GTX 1080 GeForce RTX 2080 GeForce RTX 2080
mutengo $ 549 US $ 549 US $ 549 US $ 699 US $ 699 US
High-End Ending GeForce GTX 970 GeForce GTX 1070 GeForce GTX 1070 GeForce RTX 2070 GeForce RTX 2070
mutengo $ 329 US $ 379 US $ 379 US $ 499 US $ 499 US
mutengo $ 199 US $ 249 US $ 249 US $ 249 US $ 349 US
Mune ino ongororo, ini ndichaedzwa maviri akazara etsika GeForce RTX 2070 magadzirirwo. Iwo mareferenzi misiyano akanaka neayo nyowani ekutonhora dhizaini uye akanaka anotaridzika machira asi maAIBs ane mamwe chaiwo chaiwo magadziriso etsika kunze uko, akati wandei ayo ini ndanga ndatoenzanisa padhuze nepadhuze neumwe uye nemareferenzi akasiyana.
Iine mashoma mashoma emari ekubvunza mutengo pamusoro peiyo mareferenzi mamodheru, iwo akasiyana misiyano anopa akawanda maficha senge katatu mafeni anotonhorera, bulky heatsinks, uye tsika tsika maPCB anobvumira kuti ive nani kupisa kuparara, kukwira kwemhepo kuyerera uye kumwe kuwedzera kuwedzeredza kuita uye kugadzikana kwewachi pa maawa avo ekuwedzera ekuwedzera anozove akakwirira achienzaniswa nemamwe mareferenzi. Chipingamupinyi chikuru nekuwedzeredza pamusoro peTuring GPUs ndiko kure nemuganho wemagetsi uye iwo anopa masimba epamusoro-soro kunze kwebhokisi kazhinji ndivo vane yakanyanya overulsing kugona uye kuita kuburitsa.
Mhando dzandichaedza nhasi ndidzo MSI GeForce RTX 2070 ARMOR OC uye iyo ASUS ROG STRIX GeForce RTX 2070 OC Edition. Iyo MSI GeForce RTX 2070 Nhumbi dzinodzosera $ 570 US apo ASUS's ROG GeForce RTX 2070 STRIX inosvika $ 600 US. Ini ndichave ndichifananidza makadhi ese ari padhuze nepadhuze kuti ndione kuti chii chinopa nani kukosha chirevo zvinoenderana nekuita, overuls kugona uye kutonhora kuita.
Kana iwe uchida kuverenga yedu yakazara NVIDIA Turing GPU yekushongedza yakadzika dhivha, tungamira kune iyi kubatanidza.
NVIDIA GeForce RTX 20 Series Graphics Makadhi Mahara Anotsanangurwa
Graphics Name Name Card
urongwa 12nm NFF 12nm NFF 12nm NFF 12nm NFF
Transistors 10.6 Bhiriyoni 10.6 Bhiriyoni 13.6 Bhiriyoni 18.6 Bhiriyoni
TMUs / ROPs 120 / 48 144 / 64 192 / 64 288 / 96
pabutiro 4 MB L2 Cache 4 MB L2 Cache 4 MB L2 Cache 6 MB L2 Cache
Kuwedzera Clock 1680 MHz 1620 MHz
ndangariro Kuenda kune 6 GB GDDR6 Kuenda kune 8 GB GDDR6 Kuenda kune 8 GB GDDR6 Kuenda kune 11 GB GDDR6
Memory Memory 14.00 Gbps 14.00 Gbps 14.00 Gbps 14.00 Gbps
Power Connectors 8 Pin 8 Pin 8 + 8 Pin 8 + 8 Pin
TDP 160W 185W (Vakatanga)
175W (Reference) 225W (Vakatanga)
215W (Reference) 260W (Vakatanga)
Kutanga Mutengo $ 349 US $ 499 US $ 699 US $ 999 US
Mutengo (Chinyorwa Chekutanga) $ 349 US $ 599 US $ 799 US $ 1,199 US
Tanga January 2019 September 2018 September 2018 September 2018
[inotevera peji title = "MSI GeForce RTX 2070 Mauto OC Ongororo"]
The MSI GeForce RTX 2070 ARMOR OC musiyano uri pamusoro peVentus iyo inowira padhuze neMSRP. Musiyano wemutengo pakati peARMOR OC uye mareferenzi mamodheru anogona kunge ari akati kwirei sezvo achitengesa pa $ 570 US (Newegg) kana $ 70 US pamusoro pemutengo wereferensi uchikupa inotonhorera tsika, pcb yetsika uye fekitori inopfekera kunze kwebhokisi.
Panyaya yezvakataurwa, iyo NVIDIA GeForce RTX 2070 inoratidzira 2304 CUDA cores, 144 TMUs, uye 64 ROPs. Iyo Turing TU106 yekufa inoshandiswa pakadhi kadhi inoenderana neiyo 12nm maitiro uye ine saizi yekufa ye445mm2. Iwo epakati maawa eiyo kadhi anochengetwa pa1410 MHz ye base uye 1610 MHz yekusimudzira. Iyo MSI Armor OC modhi yakavharirwa kumusoro kusvika 1740 MHz (kukurudzira) iyo ichave ichipa zvirinani mutambo wekutamba kupfuura iyo rejenenzi modhi. Iyo chip inowedzera inouya ne6 Gigarays ye ray yekutsvaga mashandiro uye huwandu hwe7.5 TFLOPs dzeFP32 compute inoburitsa. Iwo makadhi anoratidzira 8 GB GDDR6 memory interface inomhanya pamwe ne256-bit yakafara bhazi interface. Iyo yekuenzanisira modhi inofambiswa neiyo imwe chete 8 pini yekubatanidza uye ine TDP ye 175W.
Iyo ARMOR OC dhizaini yakavakirwa pane hwaro hweakambomira Armor dhizaini pamwe nekaviri Torx 2.0 mafeni anouya neZero Frozr tekinoroji uye iyo yekupararira fan blade dhizaini, ichibvumira yakakwira kufefetera kusvika kune heatsink pasi pechifukidzo. Iyo kadhi inoratidzira yakasarudzika 8 chikamu PCB (6 + 2) uye inofambiswa ne8 uye 6 pini yekubatanidza yekumisikidza. Iyo tsika pcb yakaiswa ine anti-kukombama bracket iyo inopa zvirinani kugadzikana.
Kutevera ndemamwe maficha eMSI GeForce RTX 2070 ARMOR OC tisati taenda mune zvakadzama:
Wedzerai Clock / Yekumhanyisa Speed
RatidzaPort x 3 / HDMI x 1 / USB Type-C x 1
Nadzo Thermal Thermal Dhizaini
TORX Fan 2.0 ine Kaviri Bhora Mabheyari
- Kupararira fan reza: Rinosimudzwa rakakombama jasi rinomhanyisa mweya.
- Yechinyakare fan fan: Inopa yakadzikama yemhepo kune yakakura kupisa singi pazasi.
Kubata kweAerodynamics: Iyo heatsink yakagadziridzwa kuti inyatsoshanda kupisa kupisa, kuchengetedza tembiricha yako yakaderera uye kuita kwakakwira.
Zero Frozr tekinoroji: Kumisa fan mune yakaderera-mutoro mamiriro, kuchengetedza nzvimbo isina ruzha.
Gadzirisa mavara uye LED mhedzisiro neakasarudzika MSI software uye synchronize iyo kutarisa & kunzwa nezvimwe zvinhu.
[inotevera peji title = "MSI GeForce RTX 2070 Armor OC Package"]
Iyo MSI GeForce RTX 2070 ARMOR OC kadhi yemifananidzo inouya mukati meyakajairwa kadhibhodhi yakavakirwa package. Iko kumberi kwemapakeji ese kune hombe logo ye "GeForce RTX" pamwe neiyo "MSI" logo pakona yepamusoro kuruboshwe. Isu tinogona kuona yakanaka rugged Armor theme kumberi iyo inoisa iko kusimbisa pane dhizaini yekadhi mukati.
Iko kurongedza kwakaisa kusimbisa kukuru parutivi rweRTX yezvinhu sezvo chinhu chekutanga chakanyorerwa neAIBs chichava Ray Tracing, ichiteverwa neGDDR6, DirectX 12 uye Ansel rutsigiro. NVIDIA yakabheja ramangwana remitambo yavo yeGPU paRay Tracing rutsigiro sezvo aya ari makadhi ekutanga kupa rutsigiro rwechinhu chitsva.
Iko kuseri kwebhokisi kune zvakajairika, kuratidza iwo makuru maficha uye kududzirwa kwemakadhi. Aya matatu akakosha maficha emakadhi epamusoro eMSI epamusoro ndeye Torx 2.0 fan dhizaini, yakagadziridzwa & yakanyatsoita heatsink dhizaini uye Mystic Mwenje RGB rutsigiro padivi siketi yekadhi iyo yandichange ndichidudza muchikamu chinotevera.
Iko kune zvakare kunongedzera kuGeForce.com pane yega yega kadhi yeAIB iyo iyo vashandisi vanogona kudhawunirodha madhiraivhu azvino uye application yeGeForce Zvakaitika izvo zvinofanirwa kune vatambi kuti vawane ese akaiswa seti yemakadhi matsva.
Pane tsamba yetsamba mukati mebhokisi iyo yakanamirwa pamwe neMSI logo. Iri bhokisi rine makadhi accessories uye iyo giraidhi kadhi pachayo yakavanzwa kuseri kwayo.
Kadhi iri rakaputirwa zvakanaka mukati meye anti-static chifukidziro icho chinobatsira kudzivirira chero zvisingadiwe zvimisikidzo zvakamira panzvimbo dzakasiyana siyana zvinogona kukuvadza giraidhi kadhi. Iyo kadhi zvishongedzo inosanganisira iyo Molex simba chinongedzo iyo isiri yekushandisa zvakanyanya mumashure-ekupedzisira masisitimu sezvo maPSU atove netambo dzinodiwa.
Anobatsira emabhuku uye magwaro ekumisikidza akarongedzwa mukati meMSI yakanyorwa tsamba tsamba. Iko kune MSI Vanokurumidza Vanoshandisa Nhungamiro, Yekutsigira bracket yekumisikidza gwara, tsamba yekunamira, iyo MSI DIY comic, uye imwechete dhiraivha dhisiki. Zvakanakisa kufuratira mutyairi dhisiki uye kumisikidza yazvino software uye madhiraivhita emagetsi zvakananga kubva kuNVIDIA neMSI mapeji ewebhu zvepamutemo sezvo iwo akatumirwa mumadhisiki anogona kunge ari ekare maBhaibheri uye asinganunure mashandiro akanaka emakadhi ako emifananidzo.
Kunze kwepakeji, iyo MSI GeForce RTX 2070 Armor OC inouya mune yakashongedzwa nhema uye chena color scheme uye inotaridzika zvakanaka. Kadhi racho rakafanana neyekare maArmour akateedzana asi ini ndinogona kutaura kuti dhizaini dhizaini yakanyatso gashira mamwe makuru makuru saka ngatione kana iyo nyowani RTX 2070 inogona kumira nemubatanidzwa.
[inotevera peji title = "MSI GeForce RTX 2070 Mauto OC Anotarisa Kutarisa + Teardown"]
MSI's GeForce RTX 2070 Armor OC iri rakakura rakakura kadhi kadhi riri nekuda kwehurefu hwayo hukuru. Iyo yakavakwa pamwe nekaviri slot magadzirirwo uye ingadai isina kana dambudziko kukodzera mukati maPC makesi izvo zvakanaka kune kadhi iyo yakanangana kune yakakwira-kumagumo mainstream vashandisi. Iyo kadhi inorema mukati pa1177 G uye kukura kwe295 x 140 x 51.
Iwe unofanirwa kugara uchifunga nezvehurefu paunenge uchienda kune mbiri slot giraidhi kadhi sezvo yako kesi kana mamaboardboard PCIe slot mubatanidzwa inogona kusatendera yakadaro setup. Chifukidzo chinotonhorera chinotambanudza nzira yese yekumashure kwePBB uye inoda casing ine yakanaka yemukati nzvimbo yekumisikidza chaiyo uye kuwana kune kwayo chaiyo kuyerera kwemhepo.
Iko kuseri kwekadhi kune backplate yakasimba iyo inotaridzika uye inokatyamadza kutarisa. Iyo MSI uye Dragon logo inotaridzika zvakanaka pamwe chete nesirivha yekumakisa mitsetse kumashure kwekupedzisira. Pakazara, backplate yeiyi Armor akateedzana inoyevedza uye kusimudzira kwakanaka kubva kune yapfuura backplate dhizaini pane 1070/1070 Ti Armor akateedzana.
Panyaya yekugadzira, isu tiri kutarisa iyo yakagadziridzwa vhezheni yeArmor heatsink yeMMS RTX 20 makadhi akateedzana. Iwo maArmor akateedzana akadzokororwa pamwe neGeForce 900 makadhi akateedzana uye kubvira ipapo anga achimhanya zvakafanana neTwin Frozr uye Tri Frozr mutsara. Iyo lineup yakanaka uchifunga kuti iwe unochengeta imwe mari asi uchiri kuwana rakakura renyowani fan fan kutonhora uye yakasarudzika pcb dhizaini.
Iyo Armor Thermal Dhizaini inoratidzira mamwe epamberi ekutonhora mamakanika pamwe neayo Torx 2.0 mafeni, Zero Frozr tekinoroji uye yakakwira dhivhaji ekupedzisira maturu ane akatsetseka mapaipi ekuti ave nechokwadi chakanaka chekupisa pakadhi yemifananidzo.
Kuuya kune vateveri, iyo kadhi inonyatso kuratidza maviri akasiyana fan dhizaini inoenderana neTorx 2.0 system. Vese vatatu mafeni vanobatanidza echinyakare uye akapararira fan blade tekinoroji kuti ipe zvirinani kutonhora kuita.
Iyo yekuparadzira fan blade tekinoroji ine rakadzika rakakombama banga iro rinomhanyisa mweya uye nekudaro zvinowedzera kushanda mukuchengetedza iyo GPU inotonhorera. Vese mafeni vanoendesa kaviri bhora rinotakura dhizaini uye vanogona kugara kwenguva yakareba vachiri kushanda chinyararire.
MSI zvakare inoratidzira yavo Zero Frozr tekinoroji pane iyo Tri Frozr heatsink. Ichi chimiro hachizotenderi mafeni pakadhi kunze kwekunge vasvika pane chimwe chikumbaridzo. Muchiitiko cheiyo Tri Frozr heatsink, iwo muganho wakaiswa ku60C. Kana iyo kadhi iri kushanda pasi pe60C, mafeni haazotenderera zvinoreva kuti hapana imwe ruzha yaizogadzirwa.
Iyo NVIDIA GeForce RTX 2070 makadhi emifananidzo haaratidze chero chinongedzo cheNVLINK sezvo ivo vasingatsigire Multi-GPU mashandiro. Izvi zvakaitwa nekuda kwezvikonzero zvakawanda sezvo maRTX 2070 maviri aine mukana wekupfuurisa iyo RTX 2080 Ti mumazita akagadziridzwa ayo anogona kupedzisira ave kukanganisa kudya kwekupedzisira kweGPU. Iyo imwe ndeye optimization factor uye isu tinoziva kuti yakawanda-GPU rutsigiro haisi iyo yakanakisa kutenderedza mazuva ano saka NVIDIA yakango chengeta iyo kune vashandisi avo vari kuda kubhadhara mari yepamberi pamakadhi avo ekupedzisira ekupedzisira.
Nekunze kwekadhi kwaitwa, ini zvino ndichatanga kutora tariso pane zviri pasi pehood yeGeForce RTX 2070 Amor OC.
Iyo heatsink yakagadzirirwa kuti ive denser nekushandisa yakatwasuka kumberi fin-based dhizaini. Izvi zvinobvumira mweya wakawanda kuti upfuure nemumapini zvisina tsarukano, pasina kukonzera bongozozo raizoguma neruzha rusingadiwe.
Panzvimbo pekushandisa ndiro inotonhorera kuvhara iyo GPU, MSI iri kushandisa yakatsetseka kupisa mapaipi ayo anoita akanangana zvakananga neGPU kudzima kupisa. Iko kune akazara mashanu emhangura kupisa mapaipi ane akatsetseka mativi echimiro iyo anobatsira kuwedzera kupisa kupisa kune iyo huru heatsink. Kune zvakare machira ekupisa anoiswa pamusoro peVRAM uye masimba ekuendesa magetsi ekuwedzera kupisa kupisa. Kuti ibvise zvese, MSI inoshandisa yavo yakasarudzika Thermal Compound X iyo inonzi inopa yakanyanya kupisa tembiricha uye kupisa kupisa kana ichienzaniswa neyechinyakare TIM kunyorera.
Iyo MSI GeForce RTX 2070 Armor OC kuve yakanyatso tsika modhi inoshandisa iyo 8 uye 6 pini yemagetsi yekubatanidza kumisikidza. Izvi zvinobvumidza iyo bhodhi kuti iwane simba rakawanda rekushanda pane yakakwira wachi kumhanya uye kununura kugadzikana kuri nani nemaoko overulss. Cherekedza kuti iyo modhi yemhando inongoda imwechete pini yemagetsi yekubatanidza kubhuti.
Ini / O pamakadhi emakadhi emifananidzo ine revhizheni scheme inosanganisira matatu Ratidza Port 1.4a, imwe HDMI 2.0b uye imwe chete USB Type-C chiteshi cheVirtualLink yekubatanidza kune yepamusoro-kumagumo HMD (Musoro Wakakwidzwa Kuratidzira).
MSI yakaratidza yakasarudzika 8 chikamu PCB (6 + 2) pane yavo RTX 2070 Armor OC kadhi yemifananidzo iyo inofambiswa ne8 uye 6 pini yekubatanidza gadziriso. Iyo tsika pcb yakaiswa ine anti-kukombama bracket iyo inopa zvirinani kugadzikana.
Anotevera mashoma mashoma ekuvhara-pfuti dzeRPBB iyo iri kupihwa pasi pehodhi yeArmor OC akateedzana makadhi emifananidzo.
MSI GeForce RTX 2070 ARMOR OC Mystic Mwenje RGB
MSI RTX 20 makadhi akateedzana anoshandisa yavo Mystic Mwenje RGB tekinoroji kukupa iwe inoonekwa inofadza yekuvhenekera ruzivo pamakadhi ako emifananidzo. Kune huwandu hwese gumi nematanhatu akasiyana eRGB mhedzisiro iwe aunogona kusarudza kubva uye makadhi ane mashanu maRGB ekumisikidza mapoinzi, matatu kumberi kwekumberi kumashure uye rimwe bhaa mwenje wakakomberedza kudivi rekadhi rinotaridzika chaizvo. Kune zvakare kugona kwekumisa kumhanya uye kupenya iko kunoshanda maRGB maLED.
Iwe unogona kugadzirisa zvizere mwenje yeRGB kune zvaunofarira uchishandisa iyo MSI Mystic Light application kubva pawebhu reMSI.
Kutevera ndizvo zvinoita kadhi remifananidzo kana radzimira.
[inotevera peji title = "ASUS ROG GeForce RTX 2070 STRIX OC Ongororo"]
The ASUS ROG GeForce RTX 2070 STRIX OC musiyano uri pamusoro RTX 2070 musiyano mumutsara weASUS. Izvi zvinoratidzwa zvakare mumutengo unova $ 100 US kupfuura mutengo wereferenzi weGeForce RTX 2070 kadhi yemifananidzo. Iyo $ 600 US (Newegg) mutengo waizoita kuti vatengi vafunge kaviri sezvo iyo RTX 2080 inogona kuwanikwa ne $ 100 zvimwe. Zvakare zvakare, ASUS iri kupa zvimwe zvakakosha izvo zvisingawanikwe pamakadhi ereferenzi senge yekumberi kutonhora kuburikidza neROG STRIX inotonhorera, yakazara yakazara tsika PCB uye yakanaka fekitori overuls.
Panyaya yezvakataurwa, iyo NVIDIA GeForce RTX 2070 inoratidzira 2304 CUDA cores, 144 TMUs, uye 64 ROPs. Iyo Turing TU106 yekufa inoshandiswa pakadhi kadhi inoenderana neiyo 12nm maitiro uye ine saizi yekufa ye445mm2. Iwo epakati maawa eiyo kadhi anochengetwa pa1410 MHz ye base uye 1610 MHz yekusimudzira. Iyo ROG STRIX OC modhi yakavharirwa kumusoro kusvika 1815 MHz (kukurudzira) iyo ichave ichipa zvirinani mutambo wekutamba pane iyo modhi yekureva. Iyo chip inowedzera inouya ne6 Gigarays ye ray yekutsvaga mashandiro uye huwandu hwe7.5 TFLOPs dzeFP32 compute inobuda. Iwo makadhi anoratidzira 8 GB GDDR6 memory interface inomhanya pamwe ne256-bit yakafara bhazi interface. Iyo yekuenzanisira modhi inofambiswa neiyo imwechete 8 pini yekubatanidza uye ine TDP ye 175W.
Iwo ASUS ROG STRIX makadhi emifananidzo anotsanangurwa nemagadzirirwo awo uye ndiwo anozivikanwa kwazvo muindasitiri. Iyo kadhi inoratidzira katatu fan dhizaini asi kusiyana neiyo axial tech fan inoshandiswa pamakadhi eRTX 2080 uye pamusoro, iyo ROG STRIX 2070 OC ichiri kushandisa vateveri vemapapiro-blade. Aya mafeni akange asina nyaya yekutangira asi zvaizove zvakanaka kuona iwo akagadziridzwa axial tech mafeni pane mamwe akajairika makadhi futi. Zvimwe kunze kweizvozvo, ASUS inopawo yavo MaxContact tekinoroji yakavakirwa heatsink iyo inopa ka2 kusangana nekuGPU pane yechinyakare nickel yakafukidzwa mhangura nzvimbo, ichibvumidza iri nani kupisa kupisa.
Iyo kadhi inouya neyakazara tsika pcb dhizaini uye ine 10 Phase SAP II dhizaini iyo inoshandisa premium zvikamu kuendesa zvirinani overulsing uye yepakati kugadzikana kana uchimhanyisa giraidhi yakanyanya kunyorera.
Kutevera ndemamwe maficha eiyo ASUS ROG GeForce RTX 2070 STRIX OC tisati taenda mune zvakadzama:
NVIDIA KUITA: ROG GeForce RTX makadhi emifananidzo anofambiswa neiyo Turing GPU dhizaini uye yese-nyowani RTX chikuva. Izvi zvinokupa iwe kusvika ku6X mashandiro emakadhi ekare-echizvarwa makadhi uye inounza simba reye-chaiyo nguva ray yekutsvaga uye AI kumitambo.
DirectX 12: Simba masimba matsva ekuona uye ekupa matekiniki emamwezve akafanana nemitambo
NVIDIA Shadowplay Rekodha uye ugovane yemhando yepamusoro Gameplay mavhidhiyo, screenshots, uye mhenyu hova neshamwari dzako.
Patent Wing-blade Fans kununura yakakwira mweya kumanikidza, yakaderedzwa ruzha mazinga, IP5X yakasimbiswa guruva kuramba uye 0dB modhi yemitambo yakanyarara.
MaxContact Technology inobvumidza 2X kumwe kusangana neiyo GPU chip yekunatsiridza kupisa kwemafuta.
Auto-Yakanyanya Tekinoroji inoshandisa otomatiki kusimudzira kuvimbika.
Super chiwanikwa Simba II inosanganisira premium alloy choko, solid polymer capacitors, uye huwandu hweakakwira-azvino magetsi matanho ekuchidzira maTuring's cores.
ASUS FanConnect II inoshongedza 2 yakasanganiswa-inodzorwa fan misoro yeakanakisa system kutonhora.
GPU Tweak II inopa intuitive performance tweaking uye kudziya kwekushisa.
[inotevera peji title = "ASUS ROG GeForce RTX 2070 STRIX OC Package"]
Iyo ASUS ROG GeForce RTX 2070 STRIX OC kadhi yemifananidzo inouya mukati meyakajairwa kadhibhodhi based package. Iko kumberi kwemaviri mapakeji kune hombe "GeForce RTX" brand logo pamwe neiyo "ROG" logo pakona yepamusoro kuruboshwe. ASUS inozivikanwa kushandisa yavo ROG STRIX logo pamwe nemufananidzo mudiki wemakadhi avo emifananidzo papakeji uye ichi hachisi icho chakasarudzika.
Iko kurongedza kwakaisa kusimbisa kukuru parutivi rweRTX yezvinhu sezvo chinhu chekutanga chakanyorerwa neAIBs chichava Ray Tracing, ichiteverwa neGDDR6, DirectX 12 uye Ansel rutsigiro. NVIDIA yakabheja ramangwana remitambo yavo yeGPU paRay Tracing rutsigiro sezvo aya ari makadhi ekutanga kupa rutsigiro rwechinhu chitsva. Iwe unogona zvakare kucherechedza chakasiyana chakasiyana cheiyi kadhi yemifananidzo kumberi, OC mune yangu. Iyo ROG STRIX 2070 inowanikwa mune zvakajairwa, OC uye Zvemhando dzakasiyana uye iro bhokisi rakanyorwa zvakajeka kuti ndeupi musiyano urikuwana.
Iko kuseri kwebhokisi kune zvakajairika, kuratidza iwo makuru maficha uye kududzirwa kwemakadhi. Izvo zvakakosha zveiyo ASUS ROG STRIX kadhi ndiyo Auto-Yakanyanya Tekinoroji uye iyo Maxcontact tekinoroji iyo yakashandiswa mukugadzirwa kweiyi kadhi yemifananidzo. Iyo kadhi iri zvakare AURA Sync inoenderana uye inoshandisa maWing-Blade mafeni kuendesa yakakwira mweya kubuda kune zvemukati.
Pane bhokisi rechipiri mukati mehomwe huru iyo ine yakanaka manyorerwo uye chena "STRIX" yakamisikidzwa yakamisikidzwa mukati.
Anobatsira emanyowani uye ekumisikidza madhairekitori akazara mukati pamwe neinokurumidza Vashandisi Gwaro, tsamba yekunamira uye imwechete dhiraivha dhisiki. Zvakanakisa kufuratira mutyairi dhisiki uye kumisikidza yazvino software uye madhiraivhita emagetsi zvakananga kubva kuNVIDIA uye MSI mapeji ewebhu zvepamutemo sezvo iwo akatumirwa mumadhisiki anogona kunge ari ekare maBhaibheri uye asiri kuunza mashandiro akanaka emakadhi ako emifananidzo. Iyo kadhi zvishongedzo inosanganisira iyo Molex simba chinongedzo iyo isiri yekushandisa zvakanyanya mumashure-ekupedzisira masisitimu sezvo maPSU atove netambo dzinodiwa.
Kunze kwebhokisi, ini ndinogamuchirwa neakajairwa kutarisa dhizaini iyo ASUS yanga ichishandisa pamakadhi avo kwenguva yakati ikozvino. Chaizvoizvo, akakwirira kumusoro RTX 20 makadhi akateedzana anouya neAxial-Tech mafeni ayo anovaita akasiyana zvishoma achienzaniswa neyekare GTX 10 makadhi akateedzana asi iyo STRIX RTX 2070 ichiri kutora iyo yakafanana kutonhora dhizaini seyakatangira uye kuva akatendeseka, iyo inotonhorera iri imwe yeanotaridzika zviri nani mumusika izvozvi.
[inotevera peji title = "ASUS ROG GeForce RTX 2070 STRIX OC Yakatarisisa Kutarisa + Teardown"]
ASUS's ROG GeForce RTX 2070 STRIX OC yakajairwa saizi yemifananidzo kadhi. Iyo yakavakwa pamwe nekaviri slot magadzirirwo uye ingadai isina kana dambudziko kukodzera mukati maPC makesi izvo zvakanaka kune kadhi iro rakanangana nekumusoro-kumagumo mainstream vashandisi. Iyo kadhi ine zviyero zve30.5 x 13.06 x 4.89 cm.
Iwe unofanirwa kugara uchifunga nezve kukwirira kana uchienda kune mbiri slot kadhi mhinduro sezvo yako kesi kana mamaboardboard PCIe slot mubatanidzwa inogona kusatendera yakadaro setup. Chifukidzo chinotonhorera chinotambanudza nzira yese yekumashure kwePCB uye inoda casing ine yakanaka yemukati nzvimbo yekumisikidzwa kwakakodzera.
Kumashure kwekadhi, tinoona yakanakisa inotaridzika ROG STRIX backplate iyo inouya yakabatana neASUS Aura Sync mwenje. Tichasvika kuAura Sync chikamu zvishoma asi kungotarisa ino yakanaka backplate inoratidza kuti iyo kadhi iri kuzopa yakakomba punchi. Iko kune akachekwa munzvimbo dzekuisa uye isu tinogona kuona yakasarudzika mameseji kuyambuka backplate mune yesirivha lining.
Panyaya yekugadzira, isu tiri kutarisa yakanaka, yese matte nhema jira inouya neakasarudzika uye kwazvo maindasitiri ekuvaka dhizaini. Kadhi iri rine mafeni matatu kumberi, ese ari 90mm uye anouya neASUS's patent Wing Blade dhizaini iyo inopa 105% yakakwira mweya kumanikidza uye inoshanda 3x yakanyarara kupfuura makadhi ereferenzi.
Chifukidziro chinouya nekucheka iyo inoitisa ASUS's AURA Sync mwenje. Imwe yeaya matanhatu akachekwa anouya nema LEDs anovhenekera uye anogona kuchinjwa kuburikidza neAURA RGB Lighting software. Iyo software inobvumidza akati wandei akasiyana mwenje modhi uye yakazara RGB mavara (anosvika 16.8 mamirioni).
Kune zvakawanda kune mafeni pane kungova wakanyarara uye uchipa yakawanda mweya. Iyo Wing-Blade dhizaini zvakare iri IP5X-Certified, ichipa kuramba guruva uye zvidimbu zvidiki zvinogona kupinda musangano weGPU. Kurwisa guruva kunovandudza kuvimbika uye kunopa hupenyu hwakareba.
Iwo mafeni ane zvakare tekinoroji ye0dB zvinoreva kuti mafeni haazotenderera kunze kwekunge yarova imwe tembiricha. Muchiitiko cheROG STRIX 2070 OC, iri 55C (Dhigirii).
Nekunze kwekadhi kwaitwa, ini zvino ndichatanga kutora tariso pane zviri pasi pehood yekadhi kadhigiramu. Chinhu chekutanga kubata ziso rangu hombe yekupedzisira stack iyo chikamu chebeefy heatsink iyo makadhi anoshandisa.
ASUS yaita rakakura rinoyevedza basa ne heatsink iyo inouya muzvikamu zviviri. Iyo hombe katatu-fan shroud inosundira mweya kuzasi kune hombe heatsink iyo inopa 40% yakawanda kupisa kupisa nzvimbo iyo inobvumidza iyo 30% zvirinani kutonhora kuita. Iyo MaxContact tekinoroji mukati me fan iri 10% kumeso kune echinyakare kupisa spreader uye inouya ne2x yakawanda nzvimbo yekubatana yeGPU. Yakazara matanhatu mapaipi ekupisa mapaipi anomhanya nepakati pemaviri heatsinks, achidzingira kunze kupisa kubva kuGPU pamusoro.
Kutaura nezve heatsink, iro rakakura block rine 2x 8mm uye 6x 6mm yakanyungudutswa mhangura yakakomberedzwa yakaita pombi dzekupisa ine dhizaini yakanyanyisa kutamisa kupisa kubva pachigadziko chendarira kuenda kune heatsink zvinobudirira. Iyo bhesimendi pachayo yakasimba nickel-yakafukidzwa base ndiro, ichiendesa kupisa kune kupisa mapaipi nenzira inoshanda kwazvo. Kuti ibvise zvese, MSI inoshandisa yavo yakasarudzika Thermal Compound X iyo inonzi inopa yakanyanya kupisa tembiricha uye kupisa kupisa kana ichienzaniswa neyechinyakare TIM kunyorera.
Iyo ROG STRIX 2070 OC inoratidza yetsika pcb iyo inoreva kuti magetsi emagetsi ari zvachose asiri mareferenzi. Simba rinopihwa kuburikidza ne6 + 8-Pin chinongedzo chinogadzirirwa zvinoreva kuti tiri kutarisa kuwanda kwesimba re250W. Kadhi iri rine yepamutemo TDP ye175W (mareferenzi mamodheru) asi izvo zvikamu zveprimiyamu zvinoita shuwa kuti chidimbu chese chemuto chinopihwa kune epakati, ndangariro, uye maVRM kana apfekedzwa.
Kana usiri fan weiyo RGB maLED, ASUS ine Stealth mode switch iyo inokutendera kudzima kana kuvhura, ese maLEM ari pakadhi.
Iyo ASUS ROG GeForce RTX 2070 STRIX OC inoratidza ine simba 10 chikamu Super Kubvumira Simba II dhizaini. Iyi yakagadziridzwa pcb dhizaini inovandudza mashandiro, kuderedzwa kwesimba kurasikirwa uye inokwanisa kuwana matrmal mutoro mazinga ari 50% anotonhorera kupfuura ekare dhizaini
Iyo PCB yakafukidzwa neakafa-kukanda iyo inopa kuwedzera kupisa kupisa kweyekuyeuka uye maVRM zvakare ichipawo kuwedzera kusimbisa. Iyo denderedzwa yakaburitsa kupisa mapaipi ita shuwa kuti kupisa mutoro unogoverwa zvakaenzana pakati peheatsink matombo.
Kutevera mashoma mashoma ekuvhara-pfuti yeRPBB iri kupihwa pasi pehodhi yeROG STRIX OC akateedzana makadhi emifananidzo.
ASUS yakaisa magetsi ekuyera magetsi eiyo kadhi yemifananidzo, padyo padyo nemagetsi ekubatanidza. Izvi zvakakosha kune vanopfekedza uye vanofarira vanoda chaiyo-nguva ruzivo pane iyo voltage iri kupihwa iyo kadhi uku uchiisa iyo kadhi pasi pekunyanyisa overulsing mitoro.
Kumashure kwekadhi, tinogona kuona akawanda ma4-Pin macomputer ari chikamu cheiyo ASUS Fan Connect II system. Iyi sisitimu inopa maviri 4-Pin, yakasanganiswa inodzorwa fan misoro iyo inogona kuve yakabatana nePWM uye DC mhando mafeni eiri nani system kutonhora. ASUS yakatowedzera AURA Sync RGB musoro pamakadhi avo emifananidzo iyo inogona kusungirirwa kune LED tambo yeP PC magetsi uye maitiro.
ASUS ROG STRIX makadhi akateedzana anoshandisa yavo AURA SYNC RGB tekinoroji kukupa iwe inoonekwa inofadza yekuvhenekera ruzivo pamakadhi ako emifananidzo. Pane huwandu hwese hutanhatu hweRGB mhedzisiro iyo iwe yaunogona kusarudza kubva uye makadhi ane masere eRGB ekumisikidza mapoinzi, matanhatu kumberi, rimwe kudivi uye rimwe kumashure kwekadhi rinotaridzika chaizvo. Iwe unogona kugadzirisa zvizere mwenje yeRGB kune zvaunofarira uchishandisa iyo ASUSs 'ARUA Sync application kubva pawebhu reMSI.
[inotevera peji zita = "Bvunzo Setup"]
Isu takashandisa inotevera test system yekuenzanisa pakati pemakadhi akasiyana emifananidzo. Zvazvino madhiraivha aive aripo panguva yekuyedzwa aishandiswa kubva ku AMD neNVIDIA pane yakagadziridzwa vhezheni ye Windows 10. Yese mitambo iyo yakaedzwa yakanamirwa kune yazvino vhezheni yekuita zvirinani kuita kweNVIDIA uye AMD GPUs.
GPU Bvunzo Bench 2019
Motherboard AORUS Z390 Mudzidzisi
Vhidhiyo Cards MSI GeForce RTX 2080 Ti Mheni Z
Ruvara iGame GeForce RTX 2080 Ti Vulcan X OC
MSI GeForce RTX 2080 Ti Kubheja X Trio
MSI GeForce RTX 2080 Mutambo X Trio
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Vakasimuka
NVIDIA GeForce RTX 2080 Vagadziri Vhidhiyo
MSI GeForce GTX 1080 Ti Mheni X
NVIDIA GeForce GTX 1080 Vagadziri Vhidhiyo
MSI GeForce GTX 1070 Nhumbi X OC
MSI GeForce GTX 980 Ti Mheni OC
Gigabyte Radeon RX Vega 64 (Reference Mhepo)
XFX Radeon R9 Hasha X Liquid Yakatonhora
ndangariro G.SKILL Trident Z RGB Series 32GB (4 X 8GB) CL16 3600 MHz
chengetedzo Samsung SSD 960 EVO M.2 (512 GB)
Magetsi ASUS ROG THOR 1200W PSU
Mitambo yose yakaedzwa pa 2560 × 1440 (2K) uye 3840 × 2160 (4K) mazano.
Mufananidzo Unhu uye maikorodzano ekugadziriswa ave akagoverwa muzvidzidzo pasi apa.
Iko "mazita" makadhi ndiyo inosungirirwa apo mashizha e "overclock" ari fekitari yakavharwa maitiro anopiwa kwatiri nevakasiyana-siyana veAIB.
[nextpage title = "MSI GeForce RTX 2070 Armor OC & ASUS ROG GeForce RTX 2070 STRIX OC Zviratidzo (VULKAN)"]
Muna 2016, Id yakazoburitsa DOOM. Kuyedzwa kwangu kwaisazove kwakakwana pasina kusanganisira zita iri. Makadhi ese aikwanisa kuendesa yakaringana furemu mitengo pane iyo 1440p resolution ichishandisa marongero eNightmare, saka tarisiro yangu yakachinjika ku4K.
Wolfenstein yadzoka muThe New Colossus uye inoratidzira inokurumidza-kumhanya, gory uye hutsinye FPS chiito zvachose! Mutambo zvakare unotiisa kumashure muNazi-inodzorwa nyika seBJ Blazkowicz. Gadza panguva yeramangwana rakatarisana apo maNazi akakunda Hondo Yenyika, mutambo unoratidza kuti unogona kunakidza uye unogona kuva nehutsinye kumutambi uye kumuvengi futi. Kugonesa iro zita nyowani zvakare, id Tech 6 iyo inozivikanwa kwazvo mushure mekubudirira iyo DOOM yave. Nenzira, ID yakawanazve yavo inokudzwa FPS midzi uye vari kuuraya nemazita ese matsva.
Ultra HQ-AF, Vulkan, Async Compute On * kana iripo, Yakasarudzika Kupa uye GPU kudzima
Isu takaedza mutambo pazvirongwa zveUltra pasi peVulkan API iri yakajairwa. Async Compute yakagoneswa yemakadhi emifananidzo anoitsigira ichidzoserwa kupa uye GPU kuburitsa yakaremara.
Iwe unogona kuverenga kwedu kwakadzama kuongorora kweGPU Culling uye Yakasarudzika Kupa graphical marongero eWolfenstein II: Iyo Nyowani Colossus pano![nextpage title = "MSI GeForce RTX 2070 Armor OC & ASUS ROG GeForce RTX 2070 STRIX OC Zviratidzo (DirectX 12)"]
Madota eIyo Singularity: Kukwirisa
NVIDIA ne AMD vanga vachigadzirisa mashandiro emakadhi avo eAshes yeiyo Singularity kubvira pakaburitswa zita. Yaive yekutanga kushandisa DirectX 12 API uye yekutanga kushandisa kubva kune nyowani Async komputa tekinoroji iyo inoshandisa iyo DX12 renderer kuvandudza mashandiro.
Nhandare yehondo 1 inotidzosera kuhondo huru yaive yaida kupedza hondo dzese aka Hondo Yenyika 1. Uchishandisa yazvino Frostbite tech, mutambo unoita basa rakanaka pakutaridzika kwakanaka munzira dzese dzinokwanisika. Kubva kunzvimbo dzakavhurika dzepasirese kune chiito chakasimba uye chinopisa nepfuti, uyu mutambi wevazhinji uye mumwe chete mutambi weFPS musoro ndeimwe yeakanakisa Hondo dzehondo kusvika zvino.
Deus Ex: Vanhu Hunokamukana
Hunhu huri kurwa pachahwo uye hwakakamurwa kuita mapoka. Kune rimwe divi, isu tine yakachena uye kune imwe, isu tine yakawedzerwa. Ndiyo nyika inogara Adam Jensen uye ino ndiyo nyika yaDeus Ex: Rudzi Rwakakamurwa. Mutambo unoshandisa chizvarwa chinotevera Dawn Injini iyo yakaitwa neIO inopindirana panheyo yeinjini yavo yeGlacier 2. Mutambo uyu unosanganisira rutsigiro rweDirectX 12 API uye nderimwe remazita anotaridzika zvakanyanya anoteresa iyo GPU yakaoma chaizvo.
Iine madhiraivha achangoburwa, NVIDIA yakwanisa kukwidziridza mashandiro ePascal naMaxwell zvikamu zvavo muHitman (2016). Mutambo wave kukunda kukuru kumakadhi emifananidzo eADD ayo achiri kuratidza kuwana kwakasimba mukuita kana vachichinja kubva paDX11 kuenda kuDX12, asi NVIDIA iri kunonoka kubata madhiraivha avo.
Mumvuri weTomb Raider
Kukwira kweGuva Raider
Kumuka kweTomb Raider ndeimwe yemitambo yakanakisa yandakatamba nguva pfupi yadarika uye yakamisikidzwa kuDX12 API. Mutambo uyu unoratidzira akasiyana siyana masetingi uye isu takasarudza Zvakanyanya kwazvo, HBAO + isina chero AA.
[nextpage title = "MSI GeForce RTX 2070 Armor OC & ASUS ROG GeForce RTX 2070 STRIX OC Zviratidzo (DirectX 11)"]
Mhondi Chitendero: Mavambo
Assassins Creed Origins yakavakwa nechikwata chimwe chakagadzira Assassins Creed IV: Nhema Mireza. Ivo vanozivikanwa nekudzoreredza dhizaini uye mutambo uzivi weAassassins Creed saga uye yavo yazvino zita rechiratidzo rinoratidza izvo. Yakavakirwa muEjipitori, iyo yakavhurika-nyika chiito RPG inoratidza yayo giraidhi simba mumakona ese. Iyo inoshandisa iyo AnvilNext 2.0 injini iyo inosimudzira iyo dhiza renji renji uye kununura inonakidza kwazvo mifananidzo inoratidzira.
Isu takaedza mutambo pazvirongwa zvakakomberedzwa neTAA inogoneswa uye 16x AF. Cherekedza kuti mutambo ndomumwe wemazita anodenha zvakanyanya mumusika uye seakadaro machira uye nyaya dzekuita dziri kutemerwa kunze.
Far Mhere 5
Far Mhere 5 inomira yakazvimirira mutsivi kune akafanotangira uye inoitika muTariro County, inzvimbo yekufungidzira yeMontana. Iyo huru nyaya inotarisana nekutenderera kwezuva rekuparadzwa kwePurojekiti paEdeni's Gate uye mutungamiri wayo anokwezva Joseph Mbeu. Iyo inoshandisa yakagadzirirwa nyama Injini Injini iyo pachayo iri vhezheni yakashandurwa yeCryEngine kubva kuCrytek.
GTA V ndiyo yakanyanya kukwidziridzwa zita remitambo rakaitirwa PC. Yakagadziridzwa zvakanyanya, inotomhanya pane yangu crap GT 840M yakavakirwa palaptop ine yakatsetseka FPS pane musanganiswa wepakati / wakadzika magadziriso. Ndiri kureva chii ???
Kunze kwekugadziriswa, GTA V mutambo wakanaka. Waive Mutambo weGore wegore ra2013. Pa1440p Ultra mhando, mutambo wakatipa iwo akatsetseka mafuremu pamakadhi ese akaedzwa.
Uchishandisa iyo nyowani Anvil Injini inotevera iyo yakagadziridzwa naUbisoft Montreal, Ghost Recon: Wildlands inoenda musango uye yakakura ine yakavhurika-paseti inogara zvachose muBolivia. Uyu mutambo inyanzvi yechitatu-munhu shooter iyo inoita senge inotyisa yakafanana naTom Clancy's: Iyo Chikamu. Mutambo unotaridzika wakanaka uye nzvimbo yakakura-yakakura yeBolivia inotaridzika inoyevedza nguva dzose (Masikati / Husiku Kutenderera).
Iyo Witcher 3 Mutambo weGore Rino
Muroyi 3 ndiyo yekufungidzira kukuru RPG yenguva yedu. Iyo ine nyaya hombe, yakakura Gameplay mechanics uye yakanakisa mifananidzo. Uyu ndiwo chete mutambo wandainyatsoda kuwana FPS yakagadzikana pa4K. Ndiine GameWorks yakaremara, ndakapa ese makadhi epamusoro-soro kugona kuratidza simba ravo.
Misa Effect: Andromeda
Kuve fan hombe yeMass Effect akateedzana, ini ndaitarisira kwazvo kuuya kweAndromeda kuzochengeta masherufu. Izvozvi zvave pano, ini ndaisa iyo inomhanyisa kadhi yekutamba kuyedza. Uchishandisa Frostbite, ichangoburwa Mass Mhedzisiro zita rinotaridzika kusimba kwazvo uye akavhurika maseteni epasi pamapuraneti akasiyana anokunyudza zvakanyanya.
Middle Pasi: Shadow Hondo
Mutsivi wegamba ra2014, Mumvuri waMordor, Mumvuri weHondo anoenderera mberi nenyaya yemutambo wapfuura achienderera mberi nenyaya yemurongi Talion nemweya we elf ishe Celebrimbor, anogoverana mutumbi waTalion, sezvavanogadzira Ring nyowani yeMasimba kuunganidza mauto kurwisa Sauron. Mutambo unoshandisa yazvino Firebird Injini yakagadzirwa neMonolith Productions uye yakasimba kwazvo kunyangwe yemakadhi emifananidzo emazuva ano.
Chekupedzisira, tine Imbwa dzekutarisa 2.Aenda Aiden Pearce sezvo mutambo mutsva uchititora kubva kuChicago uye unotiisa mubhutsu dzaMarcus, mushambadzi ane ruzivo muSan Francisco. Kumhanya kunovhiringidza injini, mutambo unobva pane DirectX 11 API uye iri giraidhi ine nzara ine nzara. Unogona kuzvionera wega pazasi:
[inotevera peji title = "MSI GeForce RTX 2070 Armor OC & ASUS ROG GeForce RTX 2070 STRIX OC Thermal Miedzo"]
Hapana giraidhi kadhi ongororo yakakwana pasina kuongorora tembiricha yayo uye kupisa kwemhepo. Ose maviri makadhi emifananidzo ayo ini ndakaedza ari kushandisa akakwidziridzwa etsika kutonhora mhinduro anouya aine akanyarara uye ekuita profiles. Iwo makadhi akaedzwa nehunhu hwekuita kuti vaone kugona kwavo kuzere Iyo ASUS ROG STRIX OC musiyano unouya nehutatu feni kutonhora system nepo MSI Armor OC ichiuya nekaviri fan fan kutonhora system. Makadhi ese ari maviri anouya nePWM kutonhora uye anti-kukotama ndiro inoita kuti kadhi rive rakasimba uye rakasimba munzvimbo dzine hukasha mukati mePC yako.
Cherechedza - Isu takaedza kutakura neKombuster iyo inozivikanwa se 'simba hutachiona' uye inogona kukuvadza zvachose Hardware. Shandisa software yakadaro panjodzi yako wega!
[nextpage title = "MSI GeForce RTX 2070 Armor OC & ASUS ROG GeForce RTX 2070 STRIX OC Simba Rokushandisa"]
Ini ndakanyora mhedzisiro yekushandisa simba nekuyedza kadhi rega rega pasi pekusashanda uye kushushikana kuzere apo kadhi racho raimhanya mitambo. Yese grafiti kadhi inogadzira inoisa default TDP yekadhi iyo inogona kusiyanisa kubva kumutengesi kuenda kumutengesi zvichienderana nemaawa ekuwedzera kana bhodhi maficha avanopinira pamakadhi avo etsika. Iyo default TDP yeiyo RTX 2070 ndeye 185W (Yekutanga Edition) nepo makadhi ini ndakaedza maficha echinyakare uye ekuwedzera simba rekuisa pane yakajairwa FE musiyano.
Zvakare, zvakakosha kuti uzive kuti iyo 12nm FFN maitiro kubva kuTSMC ndiko kunatsiridzwa kwavo 16nm FF node. NVIDIA iri kupwanya yakatokura huwandu hwevatapuri uye mamwe macores kupfuura avo makadhi apfuura, ichiita imwe yechipfuva chakanyanya kuvakwa kusvika parinhasi. Izvo zvinogona kutora simba rakawanda uye mhedzisiro inoratidza izvo.
[inotevera peji title = "Mhedziso"]
Iyo NVIDIA GeForce RTX 2070 kadhi yemifananidzo iri mhinduro inonakidza kutenderedza mutengo wemadhora mazana mashanu emadhora eUS. Iyi yemitengo renji yaimbove yakachengetwa yakasarudzika kune iyo ** 500 makadhi akateedzana asi kukwira kwemutengo kwatakaona neTuring GPUs kwaona iyo RTX 80 ichikwira kusvika kune ino tier. Asi nezvakataurwa, kana iko kuita kuripo, saka pamwe hachisi chinhu chakashata zvachose. Makadhi ese ari maviri andakaedza aive fekitori akafukidzwa kunze kwebhokisi.
The MSI RTX 2070 Zvombo OC inomhanya pa1740 MHz apo iyo ASUS ROG STRIX 2070 OC inomhanya pa1815 MHz. Musiyano weASUS uchiri kuwarira kumusoro, unouyawo nemutengo wepamusoro wemadhora mazana matanhatu emadhora ekuUS uchienzaniswa neUS $ 600 US yemuenzaniso weMSI. Mutengo weiyo ASUS modhi yakafanana neyaVatangi Edhisheni RTX 570 ne $ 2070 US premium pamusoro peiyo chirevo MSRP. Iyo MSI modhi iri $ 100 isingasviki pane yeVatangi Edhisheni uye ne $ 30 premium pamusoro perevo MSRP.
Iko mashandiro emakadhi maviri emifananidzo aive akafanana neiyo ASUS ROG STRIX OC ichibuda FPS kana maviri pamberi peMSI Armor OC, chimwe chinhu chinogona kuenzaniswa neOC sezvo makadhi ese ari maviri ane maitiro akawandisa pamusoro pesimba rakabiwa miganhu. Kuvhara pamusoro pemakadhi ese ari maviri kwakafanana kunyangwe iri nani PCB dhizaini pane iyo ASUS ROG STRIX modhi. Pano, iyo Armor OC inomira chaizvo ichipesana neASUS ROG STRIX OC. Makadhi ese ari maviri anobatsira kumusoro zvakanaka pa1440p resolution uye iwe unogona zvechokwadi kuwana zvakawanda kubva kumakadhi aya pa4K nekudonhedza imwe tsananguro kuti uwane iyo yekuwedzera muganho mumafreyimu mitengo.
Panyaya yekutonhora kuita, iyo ASUS modhi inouya nekatatu fan dhizaini uye iyo inonyatso kupenya kana zvasvika kune tembiricha. Iyo modhi mune ese maviri mashandiro uye yakanyarara modhi inoita zvakasarudzika mushe ichienzaniswa neMSI's mbiri fan fan Armor dhizaini. Inofananidzwa nemamwe makadhi, tembiricha ye57C inogamuchirwa kwazvo paMSI kadhi futi. Yangu nyaya neiyo ASUS modhi ndeyekuti 0dB fan tekinoroji haimhanye mune yekuita modhi nepo Zero Frozr Technology iri paMSI kadhi inomhanya chaizvo.
Pakazara, makadhi ese ari maviri asi ndinofunga iyo MSI imwe ine zvirinani kubva pane ichienzaniswa neASUS nekuda kwemutengo wayo. Mutengo wemadhora mazana matanhatu emadhora ekuAmerica unoiswededza padyo padyo ne $ 600 US RTX 700 iyo inopfuura kadhi munzira dzese dzinobvira. Asi zvekare, kana iwe usingakwanise kutambanudza chikwama chako kumberi, makadhi ese ari maviri anotenga.
MSI GeForce RTX 2070 ARMOR OC Kugumisa Kwekupedzisira
ASUS ROG GeForce RTX 2070 STRIX OC Yekupedzisira Mhedziso
The post NVIDIA GeForce RTX 2070 8 GB GDDR6 Graphics Kadhi Ongororo FT. MSI Zvombo X & ASUS ROG STRIX yakatanga kutanga Wccftech.
Kudzokorora | ASUS ROG STRIX B450-F GAMING AM4 Motherboard
Kudzokorora | ASUS ROG Strix GL503VD Gaming Notebook
Ongorora: ASUS ROG Strix Scar G533 ilaptop ine simba uye yakangwara yekutamba